GV Face: Ny Zavatra Rehetra Ilainao Fantarina Momba ireo #SudanRevolts · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2013 7:49 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Nederlands, فارسی, Español, عربي, English
Sodaney mafana fo am-polony maneran-tany amin'izao fotoana izao no mitokona tsy hihinan-kanina entin'izy ireo hanoherana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Sodàna. Eo ambany ny sorabaventy #Strike4Sudan, nanao hetsi-panoherana teo anoloan'ny Lapam-panjakana Amerikana ao Washington DC ireo mafana fo mpitokona hatramin'ny 20 Oktobra. Ny volana lasa teo dia novalian'ny governemantan'i Sodàna tamin'ny basy sy entona mandatsa-dranomaso ireo hetsi-panoherana tanaty filaminana. Maherin'ny 200 ireo mpanohitra maty ary maherin'ny 2000 ireo voasambotra, ny sasany aza nampijaliana mihitsy.
Niparitaka eran-tany tamin'ny alalan'ny media sosialy ny sary mahery setran'ireo mpanohitra maty sy naratra, mitantara ny tantaranà fitakiam-piovàna Sodaney efa nokasaina hatao hatramin'ny 2009. Anivon'io fanoherana io ny hetsi-bahoaka tsy mampiasa hery antsoina hoe Girifna, izay midika hoe “Leo izahay. “
Tamin'ity herinandro ity ny tonian-dahatsoratsika ao MENA, Amira AlHussaini ary ny Tonian-dahatsoratra lefitra, Sahar Habib Ghazi dia niresaka momba ny #SudanRevolts niaraka tamin'ny Sodaney mpanoratra, Usamah M sy Magdi ElGizouli, ilay lehilahy ao ambadiky ny bilaogy malaza Still Sudan, ary hanontany azy ireo ny antony mahatonga ireo olona sasany miantso ireo hetsi-panoherana mitranga ireo ho Lohataona Arabo manaraka.
Tsidiho ny pejin'ny hetsika GV Face: #SudanRevolts raha mila fanazavana fanampiny.
Vehivavy mafana fo manohitra ny fitànana mpanoratra iray antsoina hoe Rania. Navoakan'ny @Girifna tao amin'ny Twitter